माधव नेपालको राजनीतिक अबिच्युअरी
- परिचय क्षत्री
अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा सबैभन्दा कमजोर र लाचार पात्र देखिएका छन् माधवकुमार नेपाल । २७ वर्षदेखि पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रही नेतृत्व गरेको पार्टीबाट केपी ओलीले कथित अनुशासनको डण्डा चलाएर निलम्बन गरेपछि उनी घरको न घाटको बनेका छन् । आफूमाथि अन्याय भएको अनुनय विनय गर्दै छन् ।
अर्कोतर्फ उनी र उनका अनुयायीहरूबाट नेकपा एमाले मात्र नभई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै पुनर्गठन गर्ने फतुर पनि सुनिन थालेको छ । तीव्र विस्मृति रोगबाट ग्रसित नेपाली समाज (नागरिक समाजसमेत), र मिडियामा उनीप्रति एक प्रकारको सहानुभूति पनि देखिन थालेको छ । यो लेखमा आजको उनको अवस्था उनकै कर्महरूको स्वाभाविक परिणति हो र उनको राजनीतिको अन्त्य पनि हो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाललाई सादगीपूर्ण जीवन जिउने, मदिरापान नगर्ने, निष्ठावान्, अनुशासित र पार्टी विधि र पद्धतिप्रति इमानदार नेताको रूपमा उनीपक्षीय नेता/कार्यकर्ता र पत्रकारहरूले चित्रण गरेको पाइन्छ । अहिले नेकपा एमालेबाट गलहत्याइएपछि उनले आफैँलाई नेकपा एमाले पार्टीका निर्माताको रूपमा पनि चित्रण गरेको पाइन्छ ।
नेकपा एमालेका निर्माता उनी पक्कै हुन् । विगत २७ वर्षदेखि उनी अविच्छिन्न रूपमा शीर्ष पहिलो वा दोस्रो नम्बरमा छन् र एमाले बनाउन उनले परिश्रम गरेका पक्कै हुन् । तर, उनले बनाएको एमाले हाल केपी ओलीले नेतृत्व गरेकै एमाले हो, अर्को आदर्श राजनीतिक संगठन होइन । उनको नेतृत्वमा जसरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म पार्टीको नाउँमा नोकरशाही र दोहनकारी संयन्त्र स्थापित गरे, त्यसको वयस्क काया हो आजको केपी ओलीको एमाले ।
यो २७ वर्षमा एमाले कसरी बन्यो र यहाँसम्म आइपुग्यो भन्नेबारे केही दृश्टान्त हेरौँ । कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित नेता/कार्यकर्ताले मासिक वा वार्षिक रूपमा निश्चित रकम पार्टीलाई बुझाउनुपर्छ, जसलाई मीठो सुनिने गरी 'लेबी' भन्ने गरिन्छ । यो परापूर्वकालमा पारदर्शी र पार्टी सदस्यताको तहअनुसार एउटै हुन्थ्यो । खुला र संसदीय राजनीतिमा आएपछि पार्टी सञ्चालनका लागि थप पैसा चाहिने भयो । त्यसपछि लेबी ह्वात्तै बढाउने उपाय एमालेले निकाल्यो । त्यो भनेको सरकारबाट तलब पाइने पदहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र सोबापत उक्त कार्यकर्ताले जागिरे जीवनभर मासिक निश्चित प्रतिशत रकम पार्टीलाई लेबीको रूपमा बुझाउनुपर्ने ।
यसलाई सरल भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छः जनताको करबाट तलब खाने पदमा एमालेको अयोग्य कार्यकर्ता भर्ती गरिन्थ्यो र आफ्नो अयोग्यताको कदरस्वरुप पार्टीलाई लेबीको रूपमा जागिरे जीवनभर घूस खुवाउँथ्यो । यसरी हजारौँ संख्यामा पार्टीका कार्यकर्ताहरू अपारदर्शी वा अन्यायपूर्ण प्रक्रियाबाट विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यालय सहायक बने, शिक्षक बने, स्वास्थ्यकर्मी बनेर एमालेको ढुकुटीमा योगदान गरिरहे । कालान्तरमा पार्टीलाई थप पैसा चाहिने भयो । अनि यो दोहन सञ्जाललाई नियमित आय नहुने पदहरूमा पनि एमालेले बिस्तार गर्‍यो ।
अर्थात् वन वा खानेपानी उपभोक्ता संस्था, विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक समितिमा पार्टीको टिकट पाउने र जितेपछि पनि पार्टीलाई लेबी बुझाउनुपर्ने भयो । कार्यकर्ताहरूबीच लाभका पदहरूमा पनि सोपानको आकांक्षा भयो; बढी लाभ हुने संस्थामा जान मन लाग्यो । समयक्रममा आफ्नै राजनीतिक आकांक्षा बढ्यो । थप पैसा चाहिने भयो । यो सबैका लागि स्वयंसेवी सेवा दिनुपर्ने ती पदहरूमा जाने कार्यकर्ताहरूले पनि दोहन गर्नैपर्ने भयो । यस्तो पैसाको निश्चित अंश पार्टीलाई पनि आउने भएकाले पार्टीले आँखा चिम्लने नै भयो ।
आफैँले सिर्जना गरेको भ्रष्ट र अक्षम दोहनकारी संयन्त्र नै आजको एमाले हो र अहिलेको आफ्नो अवस्था यसको स्वाभाविक परिणति हो भन्ने जति छिटो नेपालले बुझ्छन्, त्यति नै छिटो उनको बेचैनी र छटपटी कम हुन्छ र बुढेसकाल अलि सुखमय हुन्छ ।
उसै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा देशको संविधानभन्दा पार्टीको विधान ठूलो हुन्छ, पार्टीले सफाइ दिएपछि अनियमितता पनि नियमित हुने भयो । यही विधि प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि गोकुल बाँस्कोटादेखि भानुभक्त ढकाल सबैलाई सफाइको प्रमाणपत्र बाँडेका हुन् ।
लाभका पदहरू बढ्दै गए, नेताका गुटहरू बने । अब नेताहरूलाई एकमुस्ट नजराना चढाउनुपर्ने भयो । निर्वाचन खर्च दिनुपर्ने भयो । र, यस्तो दोहनकारी संयन्त्र विद्यालयको पियनदेखि समानुपातिक सांसद र मन्त्रीसम्म फैलिन पुग्यो । अहिले त मोतिलाल दुगड र किशोर प्रधानजस्ता व्यापारीहरू पनि प्रधानमन्त्रीको किचेनमा बसेर आर्थिक नीति बनाउँछन्; राजस्वका दर फेरबदलको सिफारिस गर्छन् र राज्य दोहनको संयन्त्र विस्तार गर्छन् ।
यो सबै संयन्त्र नेकपा एमाले नाममा नेपालले नै सिर्जना गरेका हुन् । तर, यसप्रति उनको कुनै ग्लानि वा दोषानुभूति छैन । उनी खालि यसमा विस्मित छन् कि आफैँले सिर्जना गरेको यो दोहनकारी संयन्त्रले अहिले आफूलाई 'अन्याय'पर्दा किन सहयोग गरेको छैन ? अर्थात् यो संयन्त्रमाथि केपी ओली कसरी एक्कासि हावी हुन पुगे ?
यसको सीधा उत्तर छ– शक्ति । यो अक्षम र भ्रष्टहरूको संयन्त्र हो । पार्टीलाई लेबी बुझाएर बनेका पियन, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, विद्यालय व्यवस्थापन वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, समानुपातिक सांसद वा मन्त्री, व्यापारी वा ठेकेदार, सबैलाई आफ्नो अक्षमता थाहा छ । अक्षम र भ्रष्ट हुँदाहुँदै पनि शक्तिमा रहन बढी शक्तिशालीको निगाह चाहिन्छ । रऽ त्यो संरक्षण दिन सक्ने व्यक्ति अहिले केपी ओली मात्रै हुन् ।
विधि र पद्धतिको कुरा पनि नेपालका लागि फगत देखावटी हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय पार्टीले गरेपछि नेपालले त्यो निर्णयको बचाउ गरेको सम्झनुहुन्छ ? उनले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, जनतालाई जरुरी नभए पनि पार्टीलाई जरुरी भएर राष्ट्रियसभामा लैजान थालिएको हो । उनी आफैँ पनि पहिलो संविधानसभामा दुई/दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेपछि पनि समानुपातिक सांसद बनेर प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् ? यही हो उनको विधि र पद्धतिप्रतिको निष्ठा ? आफूले सक्दा स्टालिनवादी पार्टी संरचना बनाउने अनि अहिले अनुकूल भएन भनेर विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने ?
तसर्थ नेपालले जति नै जनवाद वा विधि र पद्धतिको कुरा गरे पनि यो दोहनकारी गठजोडबाट आफ्नो लगाम छुट्दाको कुण्ठा र छटपटीबाहेक केही होइन । र, काकताली परेर नेपाल पुनः शक्तिमा फर्कन सकेनन् भने आफूले सिर्जना गरेको दोहनकारी संयन्त्रको रस केपी ओलीले एकलौटी पिइरहेको हेर्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प छैन ।
आफैँले सिर्जना गरेको भ्रष्ट र अक्षम दोहनकारी संयन्त्र नै आजको एमाले हो र अहिलेको आफ्नो अवस्था यसको स्वाभाविक परिणति हो भन्ने जति छिटो नेपालले बुझ्छन्, त्यति नै छिटो उनको बेचैनी र छटपटी कम हुन्छ र बुढेसकाल अलि सुखमय हुन्छ । त्योभन्दा उत्तम बाटो आत्मालोचनासहित सक्रिय राजनीतिबाट सन्न्यास लिनु हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७, १५:५२:००